December 8, 2019 - Hargeele - Wararka Somali State
Five questions on change and challenges in Abiy’s Ethiopia – FRANCE 24
Ethiopia News December 8, 2019
Five questions on change and challenges in Abiy’s Ethiopia FRANCE 24 Ursula von der Leyen in Ethiopia for her first visit outside the EU The Brussels Times Europe provides 170 million Euros to Ethiopia’s reform New Business Ethiopia Ethiopia Gets €170m Financial Assistance from the European Commission Ezega Five questions on change, challenges in Sii akhriso
Danjiraha Soomaaliya ee Suudaan oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Turkiga ee dalkaasi+sawirro
Soomaaliya December 8, 2019
Muqdisho(SONNA) Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Dalka Suudaan mudane Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa xafiiskiisa magaalada sedex geesoodka ah ee Khaartuum ee xarunta Dalka Suudaan kula kulmay safiirka Dowladda Turkiga u fadhiya dalkaasi Suudaan. Mudadii uu socday kulanka labada safiir ee dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga u fadhiya Dalka Suudaan ayaa waxaa ay siweyn uga wada Sii akhriso
Cayaaraha December 8, 2019
(Milan) 08 Dis 2019. Shabakada “CalcioMercato” ee dalka Talyaaniga ayaa waxay shaaca ka qaaday in macalinka Inter Milan ee Antonio Conte uu xiiseenayo lasoo saxiixashada daafaca reer Spain iyo kooxda Chelsea Marcos Alonso. 28 jirkan reer Spain ayaa lala xiriirinayaa ka tagista kooxda reer England ee Chelsea suuqa xagaaga ee soo socda. Waxaa jira kooxo badan […]Sii akhriso
Xukuumadda FS oo war ka soo saartay colaadaha ka soo cusboonaaday qeybo kamid ah Gobolka Mudug
Muqdisho(SONNA) Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay aad uga walaacsantahay dirirta iyo colaadaha maalmihii lasoo dhaafay kasoo cusboonaaday qeybo kamid ah Gobolka Mudug kuwaas oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac. Xukuumaddu waxay ugu baaqeysaa dhammaan dhinacyada ku lug leh colaaddan in ay si shuruud la’aan ah u joojiyaan, kana dhawrsadaan waxyaabaha kicin kara Sii akhriso
Wasiirka Maaliyadda XFS oo xarigga ka jaray xarumaha Canshuuraha qaar ka mid ah Degmooyinka Gobalka Banaadir+sawirro
Muqdisho (SONNA), 08 December 2019 – Waxaa maanta la daah-furay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya kaddib xarumahii canshuuraha degmooyinka Hawl wadaag iyo Hodan ee Gobolka Banaadir oo dib loo dhisay. Xarumahaan oo dhawaan si casri ah loo dhisay oo laguu tallagalay hawlaha canshuur aruurinta ayaa waxaa si ramsi ah xarigga uga jaray Wasiirka Maaliyadda […]Sii akhriso
(Barcelona) 08 Dis 2019. Barcelona ayaa ku soo laabatay tababarkeeda maanta oo Axad ah, kaddib markii ay xalay 5-2 kaga soo adkaatay kooxda Mallorca, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 16-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain. Blaugrana ayaa dib u heshay labadeeda xiddig ee Jordi Alba iyo Nélson Semedo, iyagoo sameeyay qeyb ka mid ah tababarka guud […]Sii akhriso
(Madrid) 08 Dis 2019. Kooxda Real Madrid ayaa heshay furaha ay kaga soo qaadan karto xiddiga reer France ee Paul Pogba dhigeeda Manchester United marka uu furmo suuqa kala iibsiga. Zinedine Zidane ayaa wuxuu doonayaa inuu helo adeega xiddiga ay isku wadanka ka soo wada jeedaan ee Paul Pogba si uu u xirto maaliyada cadaanka ah […]Sii akhriso
Muqdisho(SONNA) – Shir looga hadlayo amniga iyo xasiloonida guud ee dalka oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda amniga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Agaasimaha guud ee Wasaaradda amniga gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, mudane, Axmed Cabdi Kooshin oo furay shirka ayaa sheegay in shirkaan lagu xoojin doono wadashaqeynta Sii akhriso
Wasiirka Amniga Hirshabeelle oo kulan la qaatay Saraakiisha Ciidamada dowladda iyo Amisom
Jowhar.(SONNA):-Maamulka Hirshabeelle ayaa wado dadaallo lagu dhisayo Ciidanka Boliis awood leh oo ay yeelato dowlad Goboleedka Hirshabeelle, si ay u sugaan amniga deegaanada Hirshabeelle. Wasiirka cusub ee amniga maamulka Hirshabeelle, mudane, Maxamed Cabdiraxmaan kheyre oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ay tababaro u fureen dhalinyaro cusub oo Sii akhriso
Saving Somali children from vaccine-preventable diseases – Somalia – ReliefWeb
Somali News December 8, 2019
Saving Somali children from vaccine-preventable diseases – Somalia ReliefWebSii akhriso